မြင်တာနဲ့ချက်ချင်းရှယ်သွားပါ ရက်အနည်းငယ်ကြာရင်ထူးခြားပါလိမ့်မယ် – အနုပညာရပ်ဝန်း
မြင်တာနဲ့ခကြျခငြျးရှယျပါ ရှယျအပီး ရကျအနညျးငယျကွာရငျ တဈခုခုထူးခွားးပါလိမျ့မယျဗြာ..(ယုံကွညျဖို့တော့လိုတယျနောျ..)ယုံကြည်သူများသာရှယ်ရန်ပါနော်…တဂယ်လက်တွေ့ မို့ပါ. ကံပေါ်မူတည်ပြီး ယူံကြည်ပြီးရှယ်လိုက်ပါဗျာ..သင့်ရဲ့ ကံတွေ မြင့်လာပါလိမ့်မယ်.
ကံ ……အညွှန်းသို့ ခုန်ကူးရန်ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်ပါဠိဘာသာ ကမ္မ မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ပြုမူခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း ကံ၊ အမှုကိစ္စကိုဆိုလိုသည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသည် ကံအဓိပ္ပာယ်ကို လွဲမှားစွာ ကောက်ယူနားလည်ကြသည်လည်း ရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် စေတနာကို ကံဟူ ၍ ရင်းမြစ်ကျကျ ဟောပြတော် မူ၏။ ထိုကံသည် –
၁။ အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေတတ်သော ကုသိုလ်ကံ နှင့် ၂။ အကျိုးစီးပွားမဲ့ကို ဖြစ်စေသော အကုသိုလ်ကံဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ရှယ်လိုက်နော်…
မွငျတာနဲ့ခကွခြငြွးရှယပြါ ရှယအြပီး ရကအြနညြးငယကြှာရငြ တဈခုခုထူးခှားးပါလိမ့မြယဗြွာ..(ယုံကှညဖြို့တော့လိုတယနြောြ..)ယုံကွညျသူမြားသာရှယျရနျပါနောျ…တဂယျလကျတှေ့ မို့ပါ. ကံပေါျမူတညျပွီး ယူံကွညျပွီးရှယျလိုကျပါဗြာ..သငျ့ရဲ့ ကံတှေ မွငျ့လာပါလိမျ့မယျ
ကံ ……အညွှန်းသို့ ခုန်ကူးရန်ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်ပါဠိဘာသာ ကမ္မ မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ပြုမူခြင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း ကံ၊ အမှုကိစ္စကိုဆိုလိုသည်။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုသည် ကံအဓိပ္ပာယ်ကို လွဲမှားစွာ ကောက်ယူနားလည်ကြသည်လည်း ရှိသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် စေတနာကို ကံဟူ ၍ ရင်းမြစ်ကျကျ ဟောပြတော် မူ၏။ ထိုကံသည် –၁။ အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေတတ်သော ကုသိုလ်ကံ နှင့် ၂။ အကျိုးစီးပွားမဲ့ကို ဖြစ်စေသော အကုသိုလ်ကံဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ရှယ်လိုက်နော်
ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ဝက်ခြံလုံးဝသက်သာပြီး နောက်လည်း ထပ်မထွက်စေချင်ရင် ဒီနည်းလေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ…